VaMatombo Vanombochengetedzwa neMapurisa Mushure Mekuratidzira muHarare
Vatungamiri verimwe boka re Zimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, vatorwa nemaourisa vakambochengetedzwa mushure mekuratidzira pamusoro pekushomeka kwemari dzinotambiriswa vashandi munyika.
Mutungamiri wechikwata che ZCTU ichi, Va Lovemore Matombo, vatorwa pamwe chete nemunyori mukuru wesangano iri, VaRaymond Majongwe, ndokuendwa navo kukamba yemapurisa yepaHarare Central. Vazoregedzwa vachienda kudzimba dzavo pasina mhosva yavapomerwa.
Nhengo dzesangano iri dzanga dzichisvika mazana maviri dzaratidzira muHarare nhasi dzichiti vashandi vese vanofanirwa kutambiriswa mari inodarika yakatarwa kuti ndiyo inoita kuti munhu anotambira mari iri pas ipasi, ye poverty datum line, PDL, yamazana mashanu nemakumi matatu ane madhora masere pamwedzi, akwanise kurarama.
Nhengo idzi dzatanga kuratidzira kubva pa NSSA Building dzichiimba dzakananga kumahofisi egurukota rinowona nezvevashandi, Amai Paurina Gwanyanya Mpariwa, pa Compensation House.
Nhengo idzi dzanga dzakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana uye zvimwe zvezvinyorwa zvanga zvakanzi “Tipeiwo mari yemangoda tinoda mari inodarika PDL”
VaMatombo naVaMajongwe ndivo vapinda muhofisi ma Amai Gwanyanya-Mpariwa kunosiya gwaro renyunyuto vamwe vavo vakaramba vari pamusuwo pemahofisi aya vachiimba.
Pavabuda muhofisi ma Amai Gwanyanya Mpariwa, VaMatombo vaudza vamwe vavo kuti vatadza kusangana negurukota iri.
VaMatombo vati vanoda kuti hurumende igare navo pasi vataure nyaya yekushomeka kwakaita mari iri kutambiriswa vashandi munyika.
Vachibva pamahofisi Amai Gwanyanya Mpariwa, varatidziri ava vaenda zvakare paRunhare House pane mahofisi eboka revashandirwi re Employers Confederation of Zimbabwe ndokusiya vavapa zvakare gwaro renhuna dzavo.
Vachingobuda mumahofisi aya, mapurisa anga akapakatira zvombo abva atora VaMatombo naVaMajongwe pamwe chete nemutevedzeri wemunyori mukuru musangano iri, Va James Gumbi, nevamwe varatidziri.
Mapurisa aya abva audza varatidziri vese kuti vaparare ndokubva vaenda nevanhu vose vavatora ava kukamba yeHarare Central.
VaMatombo pavatorwa nemapurisa vaenda vachipopota vachiti mapurisa ari kutyora kodzero dzavo dzekuratidzira sezvo sangano ravo risingasungirwe kupihwa mvumo yekuratidzira nemapurisa.
Vakuru veZCTU ava vazoregedzwa nemapurisa vachienda kudzimba dzavo pasina mhosva yavapomerwa.